फुटबलर सागर थापा लगायतलाई विशेष अदालतले दियो सफाइ - Suvham News
विशेष अदालतले म्याच फिक्सिङको अभियोग लागेका नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वकप्तान सागर थापालगायत ६ जनालाई सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालतका रजिष्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठका अनुसार न्यायाधीशहरू बाबुराम रेग्मी, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद पोखरेलको संयुक्त इजलाशले प्रहरीको दाबी नपुगेको भन्दै उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो।
२०७२ कात्तिक २४ गते थापालगायत चार खेलाडी र एक पूर्व प्रशिक्षक धरौटीमा रिहा भएका थिए।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा म्याच फिक्सिङ गरेको अभियोगमा प्रहरीले सोही वर्ष असोज २७ गते उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो।
यसो भन्छन् सागर
१५ वर्षभन्दा बढी समय फुटबलमा बिताउँदा केही भएन । सहज भयो । यो तीन वर्ष त्यो १५ वर्षभन्दा कयौं गुणा लामो भयो । गएको तीन वर्ष बिताउन निकै अप्ठ्यारो भयो ।मैले पढाइ छाडेर फुटबललाई करिअर बनाउँछु भनेर हिँडेको थिएँ । फुटबलमा करिअर बनेर उचाइमा पुग्ने बेला एक्कासी नराम्रो आरोप लागेर मैदानबाट बाहिर जिन्दगी बिताउन सहज हुन्छ त ?
जे जे आरोपहरु आए, त्यसले मेरो जिन्दगी नै डामाडोल बनाइदियो । त्यो झुटो रहेछ भनेर अदालतबाट प्रष्ट हुँदा खुशी लागेको छ । हिजोको त्यो आरोप लागेको दिनदेखि संघर्षमा थियौं । आज त्यसबाट न्याय मिलेको छ ।
आफ्नो उमेर, आफ्नो सबै कुरा त्यसमै फुटबलमै समर्पित गरेँ । मैदानबाट बाहिर हुनुपर्दाको दुःख गाह्रो छ । हामीले बारम्बार भनिरहेका थियौं । यो नचाहिने कुरा हो । त्यस्तो काम हामीले गरेकै थिएनौं । जुन गल्ती गरेकै होइन, त्यसका लागि फुटबलबाट टाढा राखेर यति भयानक सजाय नहोस् भनेका थियौं । अहिले त्यो कुरा प्रमाणित भएको छ ।
यसले साँचो बोलेको हो भनेर अदालतले भनिदिँदा अहिले खुशी लागेको छ । हामीलाई जे जे भनियो, जस्तो जस्तो व्यवहार गरियो । त्यसबाट बाहिर निस्किएर, आरोपहरुबाट मुक्ति मिल्दा आनन्द लागेको छ ।
हामीले त आरोपकै पनि सजाय पायौं । खेल्नुपर्ने बेलामा खेल छाड्नु पर्‍यो । त्यसले हामीलाई निकै पछाडि लग्यो । त्यो समय अब फर्किएर आउँदैन । मलाई अझै राष्ट्रिय टिममा खेल्ने इच्छा छ तर, त्यसरी नै खेल्न सक्छु भन्ने छैन । समय फेरियो ।
सबैभन्दा ठूलो सजाय बितेको तीन वर्ष नै हो । हामीलाई जसले यो अवस्थामा पुर्‍याएको छ उनीहरुमाथि पनि छानबिन होस् । नभएको आरोप लगाउनेले पनि सजाय पाओस् । त्यस्तो आरोप नलागेको भए हामी राष्ट्रिय टिममै खेलिरहेका हुने थियौं ।
अब कसरी भुल्ने त्यो तीन वर्ष ? मलाई उनीहरुले नराम्रो आरोप लगाएर निकै ठूलो खाल्डोमा पारीदिए । उनीहरुलाई केही भन्नु छैन ।
अदालतले सबै कुरा प्रष्ट पारिदिएको छ । समर्थकहरुले राम्रो समर्थन गरिरहेका थिए । तपाईंले एकदिन न्याय पाउनुहुन्छ भन्ने उनीहरुको समर्थनले सहज रुपमा बाँच्न हौसला दियो । उहाँहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
Source : setopati.com/www.onlinekhabar.com
Prevभट्टा विरुद्द जागे पाँचखालवासि कार्यकम विथोल्न खाेज्ने प्रयास असफल
NextOzil to miss Germany’s final World Cup warm-up